June 10, 2019 Cele Love 0
ရှားစောင်းလက်ပပ်ကိုသုံးပြီး တစ်ပတ်အတွင်း ဝိတ်ချနည်း (၃) နည်း ရှားစောင်းလက်ပပ်ဟာ ကျန်းမာရေးအတွက်အရမ်းကို အထောက်အကူပြုတဲ့ သဘာဝဆေးစွမ်းကောင်းတစ်လက် ဖြစ်ပါတယ်။ အဆီကျရုံသာမကပဲ အသားအရေကိုလည်း အထူးလှပစေနိုင်ပါတယ်။ ရှားစောင်းလက်ပပ်ကိုအသုံးပြုပြီး တစ်ပတ်အတွင်း ဝိတ်ကျသွားမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် နော် ……… (၁) ရှားစောင်းလက်ပပ်နဲ့သံပုယို ” # ရှားစောင်းလက်ပပ်အနှစ် ၁ […]
အရေပြားယားယံခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ နောက်ကွယ်က သတိထားဆင်ခြင်ဖွယ် အကြောင်းရင်း (၆)ခု
အရေပြားယားယံခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ နောက်ကွယ်က သတိထားဆင်ခြင်ဖွယ် အကြောင်းရင်း (၆)ခု ရေချိုးပြီးစအချိန်တွေမှာ အရေပြားပေါ်မှာ ယားယံနေတတ်ပြီး ၊ လက်နဲ့ ကုတ်လိုက်တဲ့အခါ ပိုဆိုးသွားတာမျိုး၊ အချိန်ခဏလောက်နဲ့မပျောက်သွားဘဲ တချိန်လုံးယားယံနေတာမျိုး၊ တစ်နေရာတည်းမဟုတ်ဘဲ ခန္ဓာကိုယ်နေရာအနှံ့မှာ ယားယံနေတာမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် နောက်ကွယ်မှာ ဒီလိုမျိုးစိုးရိမ်ဖွယ်ရာအကြောင်းရင်းတွေ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ် နော် …. (၁) သွေးထဲမှာ အဆိပ်အတောက်တွေများနေခြင်းကြောင့် […]
အမျိုးသမီးထုကြား ရေပန်းစားတဲ့ ဆယ်လီ စံပြခင်ပွန်း (၈)ယောက် အမျိုးသမီးထုကြားမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ အိမ်ထောင်သည် အနုပညာရှင်ဆယ်လီ အမျိုးသားတွေရှိပါတယ်။သူတို့ရဲ့ အနုပ ညာအပြင် နာမည်ကြီးရတဲ့ တခြားနောက်ထပ် အကြောင်းအရင်းတစ်ခု ရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ သူတို့ရဲ့ ဇနီး ဖြစ် သူအပေါ် သစ္စာရှိမှု၊ကြင်နာဂရုစိုက်မှု၊ခင်ပွန်းကောင်းပီသတဲ့၊သား၊သမီးရှိတဲ့ သူတွေဆိုရု ဖခင်ကောင်းပီသတဲ့ အပြုအ မူတွေ […]
အဆိုတော်ဝနတို့ရဲ့ရဟန်းခံအလှူအကြောင်း LIVE လွှင့်နေစဉ် EFFECT တွေ မှားနှိပ်မိလို့ ရယ်စရာဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ဝါရှောင် ဆရာတော်ရဲ့ VIDEO အဆိုတော်ဝနတစ်ယောက် နှစ်ရှည်လများ အမြတ်တနိုးထားခဲ့တဲ့ဆံပင်အရှည်ကြီးကို စွန့်လွှတ်ပြီး သာသနာ့ဘောင်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်း ကို ဝိုင်းမော်မြို့နယ် ဝါရှောင် ရွာမှာရှိတဲ့ သီတလရံသီကျောင်းဆရာတော် အရှင်ဝိဇယ က ညခင်းမှာ Live လွှင့်ပြီး […]
လမ်းခွေဲတာ ဝမ်းနည်းစရာမဟုတ်ပါ – အရှင်ဆန္ဒာဓိက (ရွှေပါရမီတောရ)
လမ်းခွေဲတာ ဝမ်းနည်းစရာမဟုတ်ပါ – အရှင်ဆန္ဒာဓိက (ရွှေပါရမီတောရ) အခြေအနေတစ်ခုကြောင့် …မတိုက်ဆိုင်လို့ လမ်းခွဲသွားကြရင်ဝမ်းနည်းစရာ မလိုသလိုပြန်ပြီးလည်း မမျှော်လင့်ပါနဲ့ ရေစက်ရှိလို့ ဆုံခဲ့ကြပြီးကံကုန်ရင် လမ်းခွဲကြရမယ် …။ ကံမကုန်သေးရင် ပြန်ဆုံတွေ့ဖြစ်ကြမယ်~~~ ဘဝရဲ့လှည့်ကွက်တွေအောက်မှာတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မမျှော်လင့်ဘဲ တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး …. မျှော်လင့်မထားတဲ့ ကံကြမ္မာမုန်တိုင်းဖန်တီးလာပြီဆိုရင် ထင်မှတ်မထားတဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့်လည်းတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ဝေးကွာသွားကြရတာပါ […]
နေပူပူထဲမှာ ဂေါင်းပြောင်ပြောင်နဲ့ အိတ်ထဲပါလာတဲ့ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် အရာလေးတွေကို ထိုင်ရောင်းနေတဲ့ လှိုင်သာယာက အသက်(၈၀)ကျော်အဘ… မနက်စောစောစီးစီး အလှူဒါနလေးတစ်ခုပြုခွင့်ရခဲ့တယ်..🙏 အဘကအသက်(၈၀)ကျော်ပီ..လှိုင်သာယာက လာရောင်းတာတဲ့..နေပူပူထဲမှာ ဂေါင်းပြောင်ပြောင်နဲ့ အိတ်ထဲပါလာတဲ့ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်ကျောက်ချဉ်လေးတွေကိုထိုင်ရောင်းနေလေရဲ့ ….. အဘ ကျောက်ချဉ်ဘယ်လိုရောင်းလဲဆိုတော့ တစ်တုံး ဘယ်လောက်ဘယ်လောက် ဆိုပီးသူရှင်းပြတယ်..အသံတွေရော လက်တွေရောတုန်နေ ပြီ … ကျနော်အကုန်ဝယ်မယ်လို့ပြောတော့ […]
ကျောက်မဲမြို့က ဇွဲကောင်းခဲ့တဲ့ ကျောင်းသူလေး ယခုနှစ် ၁၀ တန်းစာမေးပွဲ အောင်သွားပါပြီ… အဲဒီ ကျောင်းသူလေးကတော့ မအင်ကြင်းခိုင်လို့ခေါ်ပြီး အရပ်က ၃ ပေလောက်ဘဲရှိတဲ့သမီးငယ်လေးပါ။ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲကို လေးနှစ်မြောက်ဖြေဆိုပြီးမှ ယခုနှစ်မှာ ခုံနံပါတ်ရမ-၁၀၇၉ ဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့သူလေးပဲ ဖြစ်ပါ တယ် …။ ယခုလို ဆယ်တန်းစာမေးပွဲ အောင်သွားတာနဲ့ […]
ဓမ္မတာလာချိန်မှာ မဖြစ်မနေ ရှောင်ရမယ့် အရာ(၅)ခု ….. အမျိုးသမီးလစဉ်သုံးပစ္စည်းကြော်ငြာတော်တော်များမှာတော့ အဲ့ဒီလိုအချိန်တွေ မှာ ပေါ့ပါး သွက်လက် ပြေးလွှားေ နကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ပုံကို ပြထားကြပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် အမျိုးသမီးတော်တော်များများဟာ သူတို့ အဲ့ဒီလိုအချိန် မှာ ကြော်ငြာတွေထဲကလို ပေါ့ပါးသွက်လက် ပြေးလွှားမနေနိုင်ကြပါဘူး။မအီမသာဖြစ်တာ၊ပျို့အန်တာ၊နော က်ကျော […]
ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခ ရဲ့ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း (၉ -၆-၂၀၁၉ မှ ၁၅-၆-၂၀၁၉ ထိ)
ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခ ရဲ့ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း (၉ -၆-၂၀၁၉ မှ ၁၅-၆-၂၀၁၉ ထိ) ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ ရဲ့ (၇) ရက်သားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း ၉ -၆-၂၀၁၉ မှ ၁၅-၆-၂၀၁၉ ထိတစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်းများပဲ ဖြစ်ပါ တယ် …။ […]
ရေခဲသေတ္တာ အမှားကြာင့် မျက်နှာမှာ ၃၈ ချက် ချုပ်လိုက်ရတဲ့ ကလေးလေး
ရေခဲသေတ္တာ အမှားကြာင့် မျက်နှာမှာ ၃၈ ချက် ချုပ်လိုက်ရတဲ့ ကလေးလေး အိမ်မှာ ကလေးငယ်တွေ သားမီးလေးတွေ ရှိရင် ရေခဲသေတ္တာကို ဘယ်လို မှန်မှန် ကန်ကန် အသုံးပြုရသလဲ ဆိုတာ လူကြီးမိဘတွေ အနေနဲ့ ကလေးတွေကို အချိန် တစ်ခု ပေးပြီး နားလည်အောင် သင်ပြ […]